“शेरबहादुर धेरैका, लागि कागजी, बाघ ! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
“सारमा भन्दा देउवासँग परिवर्तनकारीहरु पनि डराएका छन् र पुनरुत्थानवादीहरु पनि डराएका छन् । यद्यपि दुबैको भर देउवामै छ । र, यो नै देउवाको व्यक्तित्वको रोचक पहेली बन्न पुगेको छ । स्वदेशीमात्रै होइन, विदेशी तत्वका लागि पनि देउवा ‘पेपर टाइगर’ हुन् । भारतलाई के लागेको छ भने देउवा पश्चिमी राष्ट्रको स्वार्थ प्रतिनिधित्व गर्ने नेता हुन् । र, पश्चिमलाई के लाग्दैछ भने पछिल्लो दिनमा देउवा भारततिर ढल्कन लागेका त होइनन् ?
“उता चीनलाई के डर छ भने दलाई लामाको नाम जोडेर विवादमा तानिएका देउवाले नेपालमा अब कतै भारत वा पश्चिमाहरुको स्वार्थको प्रतिनिधित्व पो गर्ने हुन् कि ? चीनलाई पनि देउवाको त्रास छ ।”
Previous “देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयले धारा नै उल्लेख गरेन”(;के त्यो पर्दैन) त हैन ?
Next भोजपुर सेवा समाज ईजरायलको पाँचौ साधारणसभा बाट अध्यक्ष इन्दिरा अधिकारीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिती गठन,,,,